China Usb-C hub-CH06A ifektri abakhiqizi | Iqembu leBrocade
▪ I-Brocade AI I-6 in 1 USB Type C Hub ihabhu elenzelwa imisebenzi eminingi inweba ukuxhumana okulinganiselwe kwe-laptop.
▪ Iza ne-adapter esebenzayo ehlukahlukene yohlobo C-etholakalayo.
▪ Ukukhishwa kwevidiyo ye-4K HDMI: Ukusekela ukuphuma kwevidiyo engu-4K @ 30Hz noma i-1080P @ 60Hz. Mirror noma ukunweba screen notebook ku-HDTV, ukuqapha noma wokudlala. Jabulela amafilimu noma umdlalo wevidiyo kumonitha wakho. Khombisa i-PPT yakho ngama-projektha emihlangano yewebhu.
▪ Ukudluliswa kwedatha ye-Ultra-High-Speed: 3 USB3.0 port transfer video, music and files at up to 5Gbps, okuyisikhathi esiphindwe ka-10 kune-USB 2.0. Ngakho-ke ungaqedela ukudluliswa kwamafayela ngesikhathi esifushane kakhulu.
▪ Ukushaja okusheshayo kwe-100W PD: Imbobo yokushaja yokulethwa kwamandla engu-100W ikuvumela ukuthi ukhokhise ikhompyutha yakho ngejubane elikhulu. Ungasebenzisa ihabhu ngenkathi ushaja.
Ukudluliswa kwedatha yamachweba amathathu we-USB 3.0 kufika kuma-5Gbps. Nweba isikrini sakho ngembobo ye-HDMI ku-HDTV, ukuqapha noma iprojektha. Sekela ukuphuma kwe-HDMI kuze kufike kusixazululo se-4K UHD (3840x2160 @ 30Hz)
Njengamanje, imikhiqizo ye-Brocade USB C ithunyelwe emazweni angaphezu kwamashumi ayisithupha kanye nasezifundeni ezahlukahlukene, njengeNingizimu-mpumalanga ye-Asia, iMelika, i-Afrika, iMpumalanga Yurophu, iRussia, iCanada njll. Sethemba ngobuqotho ukwakha ukuxhumana okubanzi nawo wonke amakhasimende angaba khona eChina kanye nayo yonke ingxenye yomhlaba.
Siqinisekisa ukuthi iBrocade izozama konke okusemandleni ukunciphisa izindleko zokuthengwa kwamakhasimende, ukunciphisa isikhathi sokuthenga, ikhwalithi yemikhiqizo ezinzile, ukukhulisa ukwaneliseka kwamakhasimende nokufeza isimo sokuwina.
Silangazelele ukuzwa kuwe, noma ngabe uyikhasimende elibuyayo noma elisha. Sithemba ukuthi uzothola okudingayo lapha, uma kungenjalo, sicela uxhumane nathi ngokushesha. Siyaziqhenya ngenkonzo yamakhasimende ephezulu notch nempendulo. Siyabonga ngebhizinisi lakho nokusekelwa!
Ikhwalithi yomkhiqizo wethu we-USB C ilingana nekhwalithi ye-OEM, ngoba izingxenye zethu eziyinhloko ziyefana nomhlinzeki we-OEM. Imikhiqizo ye-USB C isidlulise isitifiketi sobungcweti, futhi asigcini ngokukhiqiza imikhiqizo ejwayelekile ye-OEM kepha futhi samukela ukuhleleka kwemikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso.
Langaphambilini Ibanga elide 2624ft. Uhlelo Olungenantambo Lokuthunyelwa Kwevidiyo
Olandelayo: Usb-C ihabhu-CH06B
Umsebenzi 3 * USB3.0 Kuze kufike ku-5Gbps
1 * Thayipha C Kuze kufike ku-5Gbps
1 * HDMI Kuze kufike ku-4K UHD (3840 × 2160 @ 30Hz) / 1080p / 720p
1 * 3.5mm I-audioconvenient elula ukuyisebenzisa
Xhuma futhi udlaleAkudingi Ukufakwa Kwe-Driver
Ukulethwa kwamandla 87W Ubukhulu. 100W
Umbala Okumpunga / Okuluhlaza / ukwamukela ukwenza ngokwezifiso
Isampula khokha isampula